မောင်ဖုန်းမြင့်: 2/1/08 - 3/1/08
anony.pictiger.com မှကူးယူဖော်ပြပါသည် ။
Posted by phone myint at 8:59 PM No comments: Links to this post
အခုတလော အလုပ် ထဲမှာ အလုပ်ရှုပ်နေတာရော ၊ ကို ကိုယ်တိုင် စိတ်တွေရှုပ်နေတာ ကြောင့် ခဏတာ နားခွင်. ပေးပါဗျာ ။ သိပ်မကြာ ခင်
ကျနော် ပို.စ် အသစ် တွေ ပြန်တင်ပါ့မယ် ။
Posted by phone myint at 6:28 PM No comments: Links to this post
Posted by phone myint at 4:24 PM No comments: Links to this post
ဘလော.အတွက် ပိုစ် .အသစ်တင် မလု.ိ ဟာ ရေးပီးသားကဗျာတွေကို စိတ်တိုင်း မကျ တာ ရယ်၊
တခြားအကြောင်းအရာေ၇းဖို့idea ရ လိုရငြား ဟိုဖတ်ဒီဖတ်ရင်းနဲ. ယခုကာတွန်းလေးကိုတွေ့တော့သဘောကျတာနဲ့ပြန်လည်ဝေငှလိုက်ပါတယ် .(ကြည့်ဘူးတဲ့သူများသည်းခံပါခင်ဗျာ)
ခုခောတ်မြန်မာပြည်အခြေအနေနဲ.လိုက်ဘက်ညီသလို ၊ကိုယ့် ကိုယ်တိုင်ကိုက ဟိုသင်တန်းတက်လိုက်၊ ဒီသင်တန်းလိုက်နဲ. သင်တန်းများရိုက်စားလုပ်တာခံရဘူးတော.တော်တော်လေးနှစ်သက်မိပါတယ်။
Posted by phone myint at 3:45 PM No comments: Links to this post
Posted by phone myint at 7:55 PM No comments: Links to this post
အဖြူဆုံး အိပ်မက်တွေ
မြူးတူးပျော်ပါးခွင်. ရခဲ.တယ်..............။
ကူးခတ်ကစားခွင်. ရ ခဲ.တယ်.............။
၂၄ နာရီ အလင်း ဓါတ် နဲ.
အိမ်ဆိုင် တွေ ကဘုံဆိုင်တွေထက် များတယ်
ဧည်.စာရင်း မတိုင်ရ တဲ.
သန်းကောင်ယံ လမင်း တွေများတယ်...........။
ခွေးဟောင်သံ တွေ ဒီလောက် မကျယ်လောင်သေးဘူး
ငွေမှင်ရောင် ဂျာနယ်တွေ မများ ဘူး
Posted by phone myint at 3:19 PM No comments: Links to this post
Posted by phone myint at 2:40 PM 1 comment: Links to this post
Posted by phone myint at 10:13 AM No comments: Links to this post